PC နဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ Display ပိုင်းက ပိုအရေးကြီးတာလဲ အပိုင်း(၁)
စမတ်ဖုန်းနဲ့ Laptop ထုတ်လုပ်သူ အများစု စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကို ပိုပြီး အားဖြည့်ပေးတတ်တယ် ဆိုပေမယ့် Display ပိုင်းကိုကျ လျှော့ထုတ်တတ်ကြတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင်၊ ကိုယ်က Gamer မို့လို့ Game ကောင်းကောင်းဆော့ချင်လို့ ဒေါ်လာ ၁,၀၀၀ တန် Gaming Laptop ဝယ်လိုက်ပြီးမှ Display Quality ညံ့နေလို့ External Display နဲ့ ချိတ်ကစားနေရရင် မဟုတ်သေးဘူး။
Ultrabook လိုပါးလွှာတဲ့ Laptop ကျပြန်တော့လည်း Display က မှိန်နေတဲ့အပြင် Color Accuracy လည်းမမှန့်တမှန် ဖြစ်နေလို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်တောင် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။
ဒီလိုပဲ တန်ဖိုးသင့် ဖုန်းတချို့မှာ IPS ၊ AMOLED Panel သုံးထားပါရဲ့ Colour Accuracy ပိုင်း၊ Contrast ပိုင်းမှာ အားနည်းနေတတ်ပြီး ကံဆိုးသူတွေဆို Display ကပဲ ဝါနေသလို၊ စိမ်းနေသလို ခံစားရတတ်ပါတယ်။
အခုလို Quality ပိုင်း စကားပြောတဲ့အပြင် ကျန်းမာရေး ရှုဒေါင့်ကနေ ကြည့်ပြန်ရင်လည်း အမြင်အာရုံ ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ Panel တွေကို ၉၀% လောက် သုံးထားကြတယ်။ အရေးကြီးဆုံးက Blue Light ဖြစ်ပြီး သူ့နောက်လိုက်တာ Flicker ၊ PWM Cycle (Brightness Control) အပိုင်းတွေပါ။
What does Display Matters?
အများစုက Processor ၊ SoC နဲ့ GPU ဘာညာ ဗဟုသုတ ရှိကြပေမယ့် ကျနော်ကတော့ Display ပိုင်း Sensitive ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်း ပထမဆုံး ဦးစားပေးစဥ်းစားသလို အကြောင်းပြချက်က Screen (Display) နဲ့ နေ့တဓူဝ အလုပ်လုပ်ရတာ မလို့ပါ။
ကျွန်တော် ပြောချင်တာ Laptop ဝယ်တဲ့အခါမှာ စွမ်းဆောင်ရည် တစ်ခုထဲကိုပဲ ကြည့်ပြီး ဝယ်ယူတာထက် Display ပိုင်းကို ဦးစားပေးပါ (အခြေနေအရပေါ့)
Panel အမျိုးစားများလိုက် အရည်အသွေး ကွာခြားမှုရှိသေးတာကြောင့် မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် Panel အမျိုးအစား တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ အကြောင်းကို ပထမဆုံးတင်ပြသွားပါမယ်။
စာဖတ်သူတွေ ငြီးငွေ့သွားမစိုးလို့ ပထမပိုင်းမှာ Display Panel အကြောင်း ဂယနဏ ဖော်ပြထားပြီး ဒုတိယပိုင်းမှာ Resolution ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အသိပညာတွေကို ဝေမျှသွားပါမယ်။
Laptop တွေရဲ့ ၉၀% လောက်က TN Panel ကို မှီခိုနေကြတာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ အဓိက အားသာချက်ကတော့ အနည်းဆုံးရနိုင်တဲ့ 1ms Reponse Time နဲ့ 240Hz Refresh Rate ပါ။
တခြား Panel အမျိုးအစားတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု အနည်းဆုံးဖြစ်ပေမယ့် Viewing Angel မကောင်းတာနဲ့ Color Accuracy တိကျမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့ အားနည်းချက်တော့ ရှိပါတယ်။
ခုချိန်မှာ IPS Panel တွေ 300Hz Refresh Rate ထိ ထောက်ပံ့နေပြီဖြစ်လို့ TN ကို လုံးဝလုံးဝ မရွေးမိပါစေနဲ့။ ဖုန်းတွေမှာတော့ IPS ထက် စျေးသက်သာတဲ့ TFT (Thin Film Transistor) LCD ကို သုံးကြသေးတယ်ဆိုမယ့် ရှားသွားပါပြီ
ဒီကောင့်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး Risk က ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ဈေးသက်သက်သာသာ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Budget TN Panel တွေမှာ အပြာရောင်ဖက် သန်းနေတဲ့ ပြဿနာရှိပါတယ်။
TN ကို အခြေခံ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ LED Display ဆိုရင် Intensity အလင်းပြင်းအား ပိုများတဲ့အတွက် ဆိုးကျိုးက မျက်လုံးကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာပါ (ဥပမာ မျက်လုံးညောင်းသလို ဖြစ်ပြီး အားစိုက်ကြည့်ရသလို တခါတရံ မျက်တောင်ခတ် သို့မဟုတ် အတင်းပိတ်သလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်)
တကယ်တော့ TN Panel မှာ အပြာရောင်သန်းတာကို Blue Colour Shift လို့ ပြောလေ့ရှိပြီး တစ်လက်မပတ်လည် ပုံဖော် မျက်နှာပြင်ထဲမှာပါတဲ့ RGB (Red, Green & Blue) Pixel အုပ်စုအထဲမှာမှ Blue sub-pixel အလင်းရောင်က အခြား sub-pixel တွေထက် ပိုထွက်နေတာမလို့ပါ။
ဒါကြောင့် အပြာရောင်သန်းသွားစေသလို Colour ချိန်ဖို့ နေနေသာ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါမျိုးမှာ မွဲခြောက်ခြောက် အရောင်၊ ပြာနမ်းနမ်း ဖြစ်စေတဲ့အထိ ဆိုးရွားပါတယ်။
LED ရဲ့ အားနည်းချက်ကလည်း Blue Light Emiiter ဖြစ်နေတော့ TN သုံးထားရင် ပိုဆိုးပါပြီ။ မကောင်းတာပြောပြီးသွားလို့ ဒီကောင့်မှာ IPS ထက်ပိုကောင်းတဲ့အချက်က 100% sRGB (Colour Spectrum) ကို ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ အရည်ချင်းရှိတယ်၊ ကုန်ကျစရိတ်လည်း ပိုသက်သာတယ်။
ဒါပေမယ့် သောက်တလွဲဖြစ်နေတာ TN Panel တွေဟာ 6-bit Per RGB အထိပဲ ထောက်ပံ့နိုင်တာကြောင့် Professional Monitor တွေမှာ လုံးဝ Negelect လုပ်တဲ့အထိ သုံးလေ့မရှိပါဘူး။
TN Display ကို Monitor တချို့နဲ့ Gaming Laptop တွေမှာ အသုံးပြုကြပြီး 2018 Mid-range Level တွေမှာတောင် ပါဝင်နေဆဲပါ။ အကယ်လို့ သင်သာ ထုတ်လုပ်သူဆိုရင် Performance နဲ့ လိမ်စားပြီး အမြတ်ရဖို့ ဂိမ်မာတွေကို မျက်လုံးကန်းအောင် လုပ်မယ်မထင်ပါ။
အဲ့တော့ စာဖတ်သူတွေ တန်ဖိုးနည်း Laptop၊ Gaming Laptop ဝယ်တဲ့အခါ TN ဟုတ်မဟုတ် ဆန်းစစ်ပါ။ Viewing Angle စုတ်ပြတ်သတ်နေရင် မရွေးပါနဲ့ $1,000 ထက် စက္ခုအာရုံ ပိုအရေးကြီးတယ် မဟုတ်ပါလား။
ဒီ Panel ကို Mid-Range နဲ့ High-end ထုတ်ကုန်တွေမှာ တွေ့ရနိုင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ Viewing Angel နဲ့ Color Reproduction ကြောင့် Multi-media ပိုင်းမှာ ပိုအသုံးတည့်ပါတယ်။
နောက် High End Computing တွေအတွက် တိကျပြတ်သားတဲ့ ပုံရိပ်တွေ ပေးနိုင်တဲ့အပြင် တောက်ပတဲ့ White Color နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ Response Time ကြောင့် နောက်ပိုင်း IPS Panel တွေကိုပဲ အသုံးများကြပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အဓိက အားနည်းချက်ကတော့ တခြား Panel တွေထက် Power ပိုစားတာပါ။ အဲ့ဒါကလည်း IPS Panel မှာပါတဲ့ Strong Backlight နည်းပညာကြောင့်ပါ။
Chip Manufacturer ကြီး Intel က Laptop PC Component တွေထဲမှာ Display က ပါဝါစားအများဆုံးလို့ ပြောသွားခဲ့သလို Project Athena နဲ့ ဆွဲဆန့်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါမယ့်လည်း Display Support အများကြီး လိုသလို OLED သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း မွဲရချည်ရဲ့။
အခုချိန်မှာ Overclock လုပ်ထားတဲ့ IPS Panel တွေကို Professional Monitor/Laptop Display မှာ သုံးလာကြပြီဆိုပေမယ့် ကုန်ကျစရိတ်များပါတယ်။
IPS with Advanced Tech
ဆိုကြပါစို့ 300Hz Refresh Rate ထောက်ပံ့တဲ့ Gaming Laptop ဝယ်ရင် မလိုအပ်ဘဲ ပိုက်ဆံပုံအော် ပေးလိုက်ရသလို နည်းပညာ Challenge (60Hz ပြီး144Hz ပြီး 300Hz IPS) ဖြစ်လာတာကို ကြည့်ရင် ငါတို့တွေ တနှစ်တနှစ် အဲ့နောက်လိုက်နေသလို ဖြစ်စေပါတယ်။
Panel အားလုံးထဲမှာ IPS Panel တစ်ကောင်ပဲ Black Color နဲ့ Black Tone ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန် မဖော်ပြနိုင်ပါဘူး။ Colour Contrast တသမတ်ထဲ မဖြစ်တဲ့အတွက် တောင်ဖက်ကကြည့်ရင် စိမ်းသလို၊ မြောက်ဖက်ကကြည့်ရင် ဝါသလို Colour Reproduction မမှန်၊ စာစကားပြောရင်တော့ Colour Shift ရှိကိုရှိပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေ Confused ဖြစ်မဆိုးလို့ Viewing Angle နဲ့ မရောပါနဲ့။ Viewing Angle က ဘယ်ရှုဒေါင့်ကကြည့်ကြည့် မွဲခြောက်ပြာနမ်းမှုမရှိတာကို ဆိုလိုတယ်၊ IPS မှာ ဒီအချက် မရှိပေမယ့် Colour Production အပိုင်းမှာတော့ Viewing Angle အလိုက် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Advanced High Performance AH-IPS Display ကို သုံးလာကြသလို Apple က အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ Retina Display မှာတော့ ဒီပြဿနာ ဖြေရှင်းပြီးသားပါ။ Samsung ကနေ PLS (Plane Line Switching) IPS Panel ထုတ်ခဲ့ပေမယ့် ဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီ Panel အမျိုးအစားက ရွှီရှောင် မဟုတ်သလို စျေးကလည်း သာမန် IPS တွေထက် စျေးပိုကိုပိုကြီးပါတယ်။
OLED Panel (Organic Light Emitting Diode)
OLED ကို အကောင်းဆုံး Display (The World’s Best) လို့ သိထားရင် မှားတယ်လို့ လက်ခံလိုက်ပါ။ The Best ဆိုတာထက် Better Solution လို့ ပြောကြသလို OLED အကြောင်းသိထားသူတွေ နည်းပါတယ်။
၁၉၅၀ ဝန်းကျင်လောက်ကတည်းက ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ နည်းပညာဆိုပေမယ့် အဲ့ခေတ်တုန်းက သုတေသီတွေ မထုတ်ခဲ့ကြဘူး။
Pioneer လုပ်ခဲ့တာ LG လို့ ပြောနိုင်သလို Organic ဖြစ်တဲ့အတွက် Display Panel တွေထဲမှာ အနုဆုံးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ Organic လို့ ပြောကြတယ် ဘာဆိုလိုမှန်း သဘောပေါက်ကြပါသလား။
မြင်သာအောင် ပြောရင်တော့ ဓာတုဗေဒ Term နဲ့သက်ဆိုင်ပြီး Carbon ပါဝင်တဲ့ Compound မှန်သမျှ Organic လို့ ဆိုပါတယ်၊ ဒါဆိုရင် Carbon မပါတဲ့ အရာမှန်သမျှ Inorganic လို့ သိနိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ သက်ရှိတွေဟာလည်း Carbon နဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာပါ။
မဆီမဆိုင် ထည့်ပြောချင်တာ COVID-19 Virus ဟာ Carbon Based မဟုတ်လို့ သက်ရှိ (Organic) လို့ မသုံးနှုန်းသလို Bacteria တွေမှာ Carbon Chain (ကာဗွန်ဆက်တန်း) ပါဝင်လို့ ဓာတုနည်းနဲ့ ဖြတ်တောက်လို့ရပါတယ်။
ပြောရင် မပြီးမှာစိုးလို့ OLED ဖက် ဆက်ရရင် IPS ၊ PLS ၊ TN နဲ့ အခုပေါ်နေတဲ့ Q-LED တွေထက် Overall Performance မှာ ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ရထားပေမယ့် အားနည်းချက်လည်း ရှိနေပါတယ်။
OLED Performs Better
OLED မှာ သီးသန့် အလင်းလွတ် အလွှာမပါရှိဘဲ သဘောဝအတိုင်း Organic Constituent (ပါဝင်ပစ္စည်း) ပေါ် လျှပ်စီးတဲ့အခါ လွတ်ထွက်လာတဲ့ Electron တုံ့ပြန်အားပေါ် မူတည်ပြီး အလင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ သတ္တိကို သုံးထားလို့ပါ။
ဒါကို Passive Matrix (PM) လို့ ပြောကြပြီး LG သရုပ်ပြခဲ့တဲ့ P-OLED (Passive Matrix OLED) အမျိုးစားပါ။ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ OLED Panel သုံးကြပေမယ့် အခြေခံထားတဲ့ နည်းပညာတွေ မတူကြပါဘူး။
စာဖတ်သူတွေ နားရှုပ်သွားမစိုးလို့ ၂၀၁၀ လောက်က နည်းပညာတွေဆီ မသွားတော့ဘဲ လက်ရှိ စျေးကွက်ထဲမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ OLED တွေနဲ့ပဲ ယှဥ်တွဲပြီး ပြောသွားပါမယ်။
အခုလို သဘာဝ အလင်းလွတ်အလွှာ Backlight ကို သုံးထားရတဲ့ အားနည်းချက်က နေရောင်အောက် ဒါမှမဟုတ် တောက်ပတဲ့ အလင်းရောင်တစ်ခုခုအောက်မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အသုံးမပြုနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် AM (Active Matrix) နည်းပညာ ပေါ်လာခဲ့ပြီး Brightness Control အစားထိုးဖို့ OLED Panel တွေမှာ တပ်ဆင်လာခဲ့ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေ ကြားဖူးပါတယ် ခေတ်ပေါ် OLED ဖုန်းတွေရဲ့ အမြင့်ဆုံး Brightness ကို 1,250 nits အထိ တင်ပေးနိုင်တာ Generation Improve ဖြစ်လာတာမလို့ပါ။
Samsung နဲ့ပဲ ပြောရရင် Galaxy S9/Note9 မှာ သုံးခဲ့တဲ့ Y-octa OLED Panel ထက် S10/S20 မှာ သုံးထားတဲ့ Dynamic OLED Panel က Brightness Control ပိုကောင်းသလို Absolute Colour (No Colour Shift) ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အရည်ချင်းရှိပါတယ်။
တခြားသော ထုတ်လုပ်သူတွေ OLED သုံးကြပေမယ့် စံနှုန်းတစ်ခု သတ်မှတ်ဖို့ SS နောက်လိုက်နေရတာပါ။ တရုတ် Manufacturer ကြီး BOE တောင် သူတို့ရဲ့ OLED Display ထုတ်ဖို့ Samsung ရဲ့ Organic Constituent (Panel မဟုတ်ပါ) ကို ယူသုံးရတာပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ OLED နည်းပညာကို ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်တာ တောင်ကိုးရီးယားနဲ့ ဂျပန် (သူကတော့ OLED ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းစားသူပေါ့) ပဲ ရှိပါတယ်။
ဒီတော့ မှတ်သားစရာက Organic Constituent တခုဖြစ်တဲ့ သဘာဝ အလင်းလွှတ်အလွှာ (OLED) ဟာ Active နဲ့ Passive ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိသလို LED/LCD တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ပိုပြီးပျက်စီးလွယ်တဲ့ အားနည်းချက်ရှိတယ်။
ပြီးသွားရင် စာဖတ်သူတွေ ကြားဖူးနေကျ Burn-in ဖြစ်တယ်၊ Ghosting Effect ထတယ် Display ပိုင်း ပစ်ချက် (Flaw) ကို OLED မှာ တွေ့ရပြီး IPS ၊ TN မှာ မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ ဖြစ်ပါတယ်။
OLED လို အခြေနေမဆိုးပါဘူး။ ဒီနှစ်ချက်က စိတ်ညစ်စရာ ဆိုပေမယ့် သက်တမ်းတစ်ခုနဲ့ပဲ အသုံးပြုနိုင်တာက တခြား Panel တွေထက် အဆိုးရွားဆုံး အားနည်းချက် ဖြစ်သွားစေတာပါ။
အားသာချက်တွေမှာ Perfect Black လို့ ပြောကြတယ်၊ အဲ့လို Black Value0ဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းပြချက်က အလင်းလွတ်အလွှာ မပါဝင်တာကြောင့်ဖြစ်ပြီး သီအိုရီအရ Black Value နည်းလေ Contrast ကောင်းလေပါ။
OLED တွေမှာ Infinite Contrast ပိုင်ဆိုင်လေ့ရှိပြီး ဒီအချက်က OLED Display အားလုံးနဲ့ အကျုံးဝင်တယ် မဆိုလိုပါဘူး။ ပြောချင်တာ ထုတ်လုပ်တဲ့ အရည်သွေးပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်သလို ဒုတိယ အားသာချက်ကက RGB (Red ၊ Green ၊ Blue) ၃ မျိုးပါဝင်တဲ့ Pixel အုပ်စုတစ်ခုထဲမှာ Pixel တစ်လုံးချင်းစီအလိုက် Brightness Control လုပ်နိုင်တာပါ။
ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ ပါဝါသုံးစွဲမှုလျှော့ချနိုင်သလို မျိုးဆက်ဟောင်း OLED Panel မှာ အပြောခံနေရတဲ့အချက်တစ်ချက် Sub-pixel တစ်ခုချင်းစီ အလင်း အတိုး၊လျှော့ လုပ်တဲ့အခါ Colour Shift (အထူးသဖြင့် Blue) ဖြစ်သွားတဲ့အချက်ပါ။
ပြောရင်တော့ Professional အတွက် အသုံးမကျဘူး ဖြစ်သွားသလို Colour သေချာကိုင်ရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ OLED က မသင့်တော်သလို ဖြစ်သွားစေတာပါ။ ဒါကြောင့် High-performance IPS Panel ကိုပဲ အားထားနေရသလို Luxury ထုတ်ကုန်တစ်ခုအနေနဲ့ OLED သုံးကြတယ်)
အဆိုးရွားဆုံးအချက်က သက်တမ်းတိုတဲ့အပြင် ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် အမြင့်မားဆုံး ဖြစ်နေတာပါ။ OLED အရည်သွေး ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ Micro-LED နည်းပညာ ဖန်တီးနေပြီး IPS နဲ့ OLED အားသာချက် ဖလယ်နိုင်မယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
Micro ကို Mini နဲ့မရောစေချင်ပါဘူး။ Mini ဆိုတဲ့အတိုင်း LED မီးလုံးတွေကို ပမာဏအနည်းငယ် တိုးထည့်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပြီး Micro က အရမ်းကိုအနုစိပ်သွားပါပြီ။
Display Panel တွေအကြောင်း ပြောပြီးတဲ့အခါမှာ အသင့်တော်ဆုံးက IPS Panel လို့ ထင်သွားနိုင်ပါတယ်။ IPS ဖြစ်ရုံနဲ့ ပြီးသွားပြီလား? IPS ဆိုရင် Backlight Control တသတ်မတ်ထဲ ဖြစ်ရဲ့လား (စျေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ Laptop တွေတောင် ပေါပေါပဲပဲ IPS Panel သုံးထားသူတွေ ရှိပါတယ်)
ဒုတိယက Colour Reproduction နဲ့ Resolution ၊ ဒါပြီးသွားမှ ကျန်းမာရေးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ Flicker ၊ PWM ဒါမှမဟုတ် Brightness Control ပိုင်းတွေ Display Panel အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အပိုင်း (၂) မှာ ဆက်လက် ဖော်ပြသွားပါမယ်။
ဤဆောင်းပါးသည် လေ့လာမိသမျှ ဗဟုသုတများကို ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။